တရုတ် မျက်လုံးနှင့် ခံတွင်း သန့်ရှင်းရေး အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် သုတ်ဆေး ထုတ်လုပ်သူ နှင့် ရောင်းချသူများ | Dr.Hwelmay
မျက်လုံးနှင့် ပါးစပ်ကို သန့်စင်သော အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် wipes
အချို့ကိစ္စများတွင် ခွေးများသည် ရေချိုးရန် မသင့်တော်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခွေးများ၊ ရာသီခွေးများ၊ ခွေးပေါက်များနှင့် သက်ကြီးရွယ်အို ခွေးများ ကဲ့သို့သော။ ၎င်းတို့သည် ရေချိုးရန် မသင့်လျော်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့ကိုယ်ကို စွန်းထင်းမည်မဟုတ်ဟု မဆိုလိုပါ။ တစ်ခါသုံးအမြှုပ်ကဲ့သို့ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတစ်ခုရှိနေသေးသော်လည်း အစိုတစ်ရှူးကို တိုက်ရိုက်သုတ်ရန်မှာ ပြည်တွင်းအညစ်အကြေးအတွက် တစ်ခါသုံးအမြှုပ်ကိုသုံးခြင်းထက် ပိုအဆင်ပြေပါသည်။ စိုစွတ်သော မျက်နှာသုတ်ပုဝါများသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို အစားထိုးနိုင်သော်လည်း၊ အနံ့ခံခြင်းနှင့် ပိုးသတ်ခြင်း၏ ထိရောက်မှုသည် စိုစွတ်သော မျက်နှာသုတ်ပုဝါများထက် နိမ့်ကျနေသေးသည်။
အရေပြားကို သန့်စင်ပေးပြီး စိုစွတ်နေချိန်တွင် သဘာဝ အက်ဆစ်အားနည်းသော အလွှာကို ပျက်စီးစေမည်မဟုတ်ပါ။
အစာစားပြီးနောက် နားနှင့် မျက်လုံးကို သန့်ရှင်းအောင်၊ ကစားပြီးနောက်၊ အိမ်သာပြီးနောက်၊ မျက်လုံးကို သန့်စင်ပါ။
1. ခုနစ်ခေါက် စစ်ထုတ်ခြင်း၊ EDI ရေသန့်
2. စိမ့်ဝင်မှုနည်းပညာဖြင့် ထုတ်ယူထားသော EDI သန့်စင်သောရေ၊ သန့်ရှင်းမှုမြင့်မားသော ထုတ်လုပ်မှုထိန်းချုပ်မှု၊ သန့်စင်သောရေကို တိုက်ရိုက်သောက်သုံးနိုင်သည်ထက် ကျော်လွန်၍ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု၊
1. ချဲ့ပြီး ထူလာကာ ပိုမိုပြည့်စုံစွာ သန့်စင်ပါ။
2. ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိပြီး အသုံးပြုရအဆင်ပြေသည်၊ မှန်ကန်သော အစိုဓာတ်ပါဝင်မှု
3. ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဟန်ချက်ညီစေခြင်း။
1. Flexible နှင့် elastic ၊ ကျွတ်ရန်မလွယ်ကူသလို ထိုးဖောက်ရန်မလွယ်ကူပါ။)
2. Cellulose wipes များသည် ဖုန်မှုန့်ကင်းစင်ပြီး အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း အမျှင်ဓာတ်များ ကျွတ်ထွက်မည်မဟုတ်သောကြောင့် သုတ်ရာတွင် သက်တောင့်သက်သာရှိစေပါသည်။)
အိမ်မွေး တိရိစ္ဆာန် သုတ်ဆေး နှင့် သာမာန် သုတ် များ အကြား ခြားနားချက်
လူနှင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များတွင် pH တန်ဖိုးများ မတူညီပါ။ လူ့အစိုသုတ်၏ pH တန်ဖိုးသည် လူ့အရေပြားအရ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး အများစုမှာ ခွေးများ၊ ကြောင်များနှင့် ကြောင်များကို ယားယံစေသည့် အရက်များပါရှိသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစိုသုတ်၏ PH တန်ဖိုးကို အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏ အရေပြားနှင့်အညီ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
သာမာန်အစိုသုတ်များတွင် အဓိကအားဖြင့် RO သန့်စင်သောရေ၊ ပျော့ပျောင်းသောချည်မျှင်မဟုတ်သောအထည်၊ သဘာဝ ရှားစောင်းလက်ပတ်အထွက်နှင့် ဆေးရည်များပါဝင်ပြီး အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစိုသုတ်များတွင် ဆပ်ပြာများ၊ လိမ်းဆေးများ၊ အစိုဓာတ်ထိန်းဆေးများနှင့် အမွှေးနံ့သာများပါရှိပြီး သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပိုးသတ်ခြင်းဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်။
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစိုသုတ်၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏ခန္ဓာကိုယ်မျက်နှာပြင်ကို လျင်မြန်စွာ သန့်ရှင်းစေရန်ဖြစ်ပြီး စိုစွတ်သော သုတ်များပါဝင်မှုအပေါ်မူတည်၍ ၎င်းသည် ဆံပင်တောက်ပစေခြင်း၊ အနံ့ဆိုးထွက်ခြင်း၊ ပိုးသတ်ခြင်းနှင့် ယားယံခြင်းများကို တစ်ချိန်တည်းတွင် အခြေခံ၍ ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းရေး။
Suzhou Silk Road Cloud Trading Co., Ltd. သည် Yibin Huimei Kangjian Biotechnology Co., Ltd. မှ ပိုင်ဆိုင်သည်၊ မှတ်ပုံတင်ထားသော မတည်ငွေမှာ ယွမ် သန်း 120 ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် 8000m2 မြင့်မားသော သတ်မှတ်ချက်၊ စံသတ်မှတ်ထားသော အလုပ်ရုံ၊ 100,000-grade GMPC သန့်ရှင်းသော အလုပ်ရုံနှင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ဒီဇိုင်းပိုင်းကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ ထိပ်တန်း အလိုအလျောက်စိုစွတ်သော သုတ်ဆေးထုတ်လုပ်မှုလိုင်းနှင့် အပင်ပိုးသတ်ဆေးဖြည့်ခြင်း ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကို တည်ဆောက်ထားပါသည်။ သမားရိုးကျ RO သန့်စင်သော ရေနည်းပညာနှင့် EDI ပြောင်းပြန် osmosis နည်းပညာအပြင် ကုမ္ပဏီသည် အပင်သန့်စင်သော သဘာဝပိုးသတ်ဆေးစီးရီး ထုတ်ကုန်ကို တီထွင်ခဲ့သည်။ ပိုးသတ်ခြင်းနှုန်းသည် 99.999% အထိမြင့်မားပြီး နိုင်ငံအလိုက် မူပိုင်ခွင့် ၁၉ ခုဖြင့် ပိုးသတ်ခြင်းနယ်ပယ်တွင် တော်လှန်အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Huimei Kangjian ကုမ္ပဏီသည် ပထမတန်းစား ထုတ်ကုန်များ၊ ပထမတန်းစား နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစွမ်းရည်တို့ကို ဖန်တီးကာ သန့်ရှင်း၍ ကျန်းမာပြီး အရည်အသွေးမြင့်သော စက္ကူသုတ်ပုဝါကို ပြန်လည်ရရှိရန် ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ စားသုံးသူတိုင်းအတွက် ထုတ်ကုန်။